Tanglu 2.0 "Bartholomea" wepụtara | Site na Linux
Ọ bụ n'ọnwa Febụwarị nke afọ a ka ewepụtara ụdị Tanglu mbụ, ihe mgbagha nke Debian (nke nwere ụfọdụ ngwugwu ọgbara ọhụrụ) nke Mathias Klumpp mepụtara. Ugbu a na Disemba ọ na-apụta nke abụọ a aha ya bụ Bartholomea, nke na-abịa na kernel 3.16, sistemụ 215, KDE 4.14.2 (ya na SDDM dochie KDM) yana Apper nwere nkwado Appstream, GNOME 3.14 yana onyonyo abụọ ndị ọzọ: n'otu aka Tanglu Core, inwe obere Minimalist Tanglu na-enweghị eserese gburugburu ebe obibi. N'aka nke ọzọ, onyonyo maka Docker ọ bụrụ na ịchọrọ iji tinker na Docker. M hapụụrụ gị na nseta ihuenyo abụọ a nke nsụgharị ha maka KDE na GNOME.
Budata Tanglu 2.0
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Tanglu 2.0 «Bartholomea» wepụtara
M tinyere olileanya m na ọrụ a mgbe m na-eji Debian. Obi dị m ụtọ na ọ nwụghị, ọ bụ ezie na enweghị mgbagha ọ bụla, ha kwesịrị ịmụtakwu ntakịrị banyere demm (KaOS) .. Aghọtaghị m otu onye na-enweghị ike isi nweta nkesa nke ụbọchị, yana Tanglu (dịka ọmụmaatụ) na-apụta na ngwugwu dị otú ahụ.
Ọ bụ n'ihi na ha na-eme ka nchịkọta na-abịa site na Debian Testing na SID. N'ihi ya, ọ na-ewe. Na mgbakwunye, nchịkọta ahụ n'onwe ha ga-erurịrị ebe obibi Debian na nke ahụ na-emekwa ka ọ dị ogologo.
You nwere nnukwu akụkụ nke ọrụ ndị a na-akpaghị aka? Super n'ihendesịta?
O kwere omume eh ..
Elav, nkatọ nke nchịkọta emelitere bụ nzuzu ... Anaghị m akpa oke na nchịkọta ọhụrụ na-eweta ndozi, mmezi ahụhụ, wdg. Mana iji ụdị ihe kachasị ọhụrụ, Manjaro, Arch ma ọ bụ KaOS ịke adịchaghị mma.
Ohaneze maka ihe abụọ, enwere nsụgharị nke nchịkọta nke chọrọ ụdị X nke ọzọ na nsogbu ugbu a mgbe nke a mere. Agaghị agụta na enweghi nsogbu nke nsụgharị nnwale.
Ekwenyere m na a ghaghị inwe nguzozi na nsụgharị ... ya bụ, ọ bụghị mgbe niile inwe nke ikpeazụ, mana ọ gaghị anọ oge.
Dịka ọmụmaatụ nke ihe ekwuru, enwere m ike ịkpọ Ubuntu (mana o doro anya na ọ na-agbanahụ nkwụsi ike nke ọtụtụ ihe).
Nwere ike biputere banyere KaOS, ahụmịhe gị, GTK + APPs, yana ihe ndị ọzọ na-abụghị linux like Google Chrome, TeamViewer, wdg.
Anaghị m ahụ ozi ọ bụla na distro a, ọtụtụ atụmanya na enwere ma ọ nweghị ihe mere. M na-aga n'ihu na Linux Linux.
Pedro Ortega dijo
Ihe m na-aghọtaghị bụ otu ha si ekwe ka bipụta ihe anaghị arụ ọrụ, iso disk anaghị arụ ọrụ.
Zaghachi Pedro Ortega
mmekpa a dị oke mma ...
Ha anaghị egbu gị ọchị?
Mgbe ibudata distro ọtụtụ oge na site na isi mmalite dị iche iche ma ọ nweghị ụzọ isi mee ka ọ rụọ ọrụ, ọ bụ mmadụ ka iwe were ya, ị naghị eche, ụmụ akwụkwọ?
Adịla ọchị nke ukwuu ... ma nye azịza ma ọ bụrụ na ị maara ya!
Echere m na ọ kachasị mma ijide n'aka na ihe na-arụ ọrụ nke ọma tupu ịme ya maka ọha na eze. Na distro na Gnome agaghị buut!